Ciidamada Huwanta ah oo isaga Baxay Tooratooroow iyo Muslimiinta oo dib ula wareegay.
Monday January 13, 2020 - 21:37:30 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka laga helayo gobolka Shabeellaha Hoose ee dhaca Koonfurta dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in dhaq dhaqaaqyo ciidan oo iskasoo horjeeda ay saacadihii lasoo dhaafay ka jireen deegaanno gobolkaas katirsan.
Ciidamo huwan ah oo isugu jiray American iyo Bangaraaf ayaa xalay dhaq dhaqaaqyo ka sameeyay wadada xiriirisa degmada Wanllaweyn iyo deegaanka Tooratooroow,
Maanta barqadii ayay ciidamada Mareykanka iyo maleeshiyaadka Bangaraafta ee Danab loo yaqaan waxay gudaha ugaleen Tooratooroow kadib markii ay isaga baxeen xoogaga Al Shabaab, diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Drone-ka iyo kuwa kale ee dagaalka ayaa dusha ka ilaalinayay ciidamada Huwanta ah ee duullaanka qaaday.
Wararka ka imaanaya Tooratooroow ayaa sheegaya in ciidamadii isgarabsanayay ay maanta gelinkii dambe deegaanka isaga baxeen waxaana Tooratooroow dib ula wareegay xoogaga Al Shabaab.
Goob joogayaal ayaa SomaliMeMo u xaqiijiyay in ciidamada Mareykanka iyo kuwa dowladda Federaalka ay dib ugu laabteen dhanka Garoonka Balidoogle oo markii dambe ay kasoo duuleen, markii ay ciidamada huwanta ah kasii ruun qaandanayeen deegaanka ayaa la maqlay jug xooggan waxaana loo malaynayaa in qaraxyo lagu weeraray.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay waxay sheegayaan in ciidamada hunwanta ay ka warheleen weerar xooggan oo uga imaan rabay Al Shabaab kadibna ay ufirxadeen dhaanka Balidoogle, Boqolaal qoys oo saaka isaga barakacay Tooratooroow ayaa lafilayaa in berri ay dib ugu laabtaan guryahooda waxaana xusid mudan in ganacsigii deegaanka uu maanta hakad galay.
Ciidamada shisheeye iyo maleeshiyaadka dowladda Federaalka ayaa dhibaata ku haya horumarka shacabka waxayna marwalba isku dayaan in ay carqaladeeyaan horumarrada ka jira degmooyinka iyo deegaannada lagu maamulo Shareecada Islaamka ee dhaca Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Maleeshiyaad Maxbuus kala baxay Xabsiga magaalada Gaalkacyo.
Ciidamada dowladda Masar oo Shacab ku xasuuqay gobolka Saynaa.
Qaraxyo gaadiid looga gubay ciidamada Uganda oo ka dhacay duleedka Marka.
Ciidamada AMISOM oo 4 qof ku dilay degmada Janaale ee Sh/Hoose.
Saldhigga ciidamada 'Puntland' ee deegaanka Af Urur oo Weerar madaafiic ah lagu qaaday.